Isbeddellada Sare ee Qaabeyn doona Suuqgeynta Dijital ah | Martech Zone
Talaado, Maarso 4, 2014 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waa tan Ethinos Digital Suuq-geynta infographic ku saabsan isbeddellada ugu sarreeya; suuq-geynta waxyaabaha, ka-guurinta moobiilka, is-beddelka heerka beddelka; kuwaas oo qeexaya suuq geynta dhijitaalka ah maanta waxayna u badan tahay inay saameyn weyn ku yeeshaan mustaqbalkiisa mustaqbalka.
Waxa aan uga mahadceliyo xog-ururintan ayaa diiradda saareysa hagaajinta-istiraatiijiyadda suuqgeynta dijitaalka ah. At Suuq-geynta Warbaahinta Bulshada ee bishaan, tani waa tan saxda ah ee aan ku bixin doono aragti iyo istiraatiijiyad. Suuqleyda ayaa si aad ah diirada u saaray TOFU (dusha sare ee masaafada) oo ay tabayaan inta hogaamiye ee dhacaya ama aan badalin maxaa yeelay xeeladaha looma bartilmaameedsado mana fiicna.
Iska dhig inaad tahay rajo booqaneysa xaaladaada ugu dambeysay ee cusbooneysiinta, tweet-ka, ama boostada blog-ka… aaway waddada loogu beddelayo Aaway turunturooyinkii? Miyaad cabiraysaa dhibic kasta oo wadada ah si aad u aragto halka ay sicirka dhibcaha ka soo kordhayaan? Haddii kale, waxaad u baahan tahay inaad ahaato.
Tags: marketing digitalisbeddellada suuqgeynta dhijitaalka ahqowmiyadaha
“Warbaahinta bulshada waxay soo saartaa ku dhowaad laba jibaar hogaaminta bandhigyada ganacsiga, telemarketing, mail toos ah ama PPC” - taasi waa runtii mid xiiso leh.
Waan ogahay in baraha bulshada ay muhiim tahay laakiin markaan fiirinayo tan, waxay umuuqataa inay runti jiraan waxyaabo badan oo lagu raad joogo…
Waxaan ku cusbaa suuqgeyntan dhijitaalka ah. Waxaan dareemayaa nasiib badan si aan u falanqeeyo qoraalkan. Macluumaad aad u weyn oo ku saabsan suuqgeynta dhijitaalka ah. Hayso dhajinta. Maqaalkani wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo gaar ah oo tayo leh